I-Downs ithumela isexwayiso esinamandla | Scrolla Izindaba
I-Downs ithumela isexwayiso esinamandla
IMamelodi Sundowns ithumele isexwayiso esiqinile kulo lonke iqembu eliku-Group B ngemuva kokunqoba ngamagoli amahlalnu kwelilodwa idlala ne-CR Belouzidad yase-Algeria emdlalweni wabo weTotal CAF Champions League.
Ukunqoba kwe-Sundowns – enkundleni yezemidlalo i-Benjamin Mkapa e-Dar-es-Salaam, e-Tanzania – kuqinise isikhundla sayo esicongweni se-Group B ngamaphuzu ayisithupha emidlalweni emibili, ngokushaya amagoli ayisikhombisa negoli elilodwa ekorwe lona.
Iqembu lase-Algeria i-CR Belouzidad lishaywe kakhulu ngomzuzu wesithathu uKeddad ethola imiyalo yakhe yokumasha ngokuphatha ibhola emgqeni wegoli, okuholele ekutheni kutholwe iphenathi.
UThemba Zwane usukume wakhahlela ibhola lephenathi, uMshishi udide unozinti uyewavimba kwenye inxenye ngenkathi emvukela indwo yokufaka igoli.
Sekusele kancane kuyiwe ekhefini, u-Amir Sayoud ushaye igoli elilodwa ngaphambi kokuba aye ekhefini. Ngemuva kokudlala yedwa ephikweni langakwesobunxele, uSayoud wakhipha uDennis Onyango washaya igoli kwaba ngu 1-1.
Esiwombeni sesibili uPeter Shalulile ushayele i-Mamelodi Sundowns igoli, ngekhanda ngaphakathi ebhokisini kwaba ngu-2-1 ngomzuzu wama-48.
UThemba Zwane uvule isango lezikhukhula ngesikhathi eqeda ibhande lakhe lokuqinisa iqembu lamaBrazilians ngomzuzu wama-55. Ngemuva kwemizuzu embalwa uLebogang Maboe washaya igoli lesine.
UKermit Erusmas ubeke isipikili sokugcina ebhokisini lomngcwabo le-CR Belouzidad ngemuva kokunikezwa ibhola uThemba Zwane ukuze enze u-5-1.
Umqeqeshi we-Downs uManqoba Mngqithi uthe i-CR Belouzidad yenze iphutha elikhulu ngokuthola ikhadi elibomvu ekuqaleni komdlalo kanti i-Downs ikwazile ukusebenzisa lokho.
“Ngikholwa wukuthi ukube umdlali wasemuva uvumele ukuthi igoli lingene, baebeazoqhubeka nenombolo enhle yabadlali futhi bakwazi ukuthola ithuba lokulwa emdlalweni,” kusho uMngqithi.
“Kodwa ngeshwa, ngoba besiphakeme ngokwenani, ngizwe sengathi sikuthathile lokho sakusebenzisa. Kodwa ngemuva kwezingxoxo zesikhashana size ngenhloso futhi sabelula,” kwengeza uMngqithi.
Emdlalweni olandelayo i–Mamelodi Sundowns izobhekana neTP mazembe e-Lumbumbashi.